गुल्मीमा झा`रफु`कको नाममा वृद्धले गु`माए ज्या`न यस्तो छ ना`लिबे`ली ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गुल्मीमा झा`रफु`कको नाममा वृद्धले गु`माए ज्या`न यस्तो छ ना`लिबे`ली !
गुल्मी- गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का ६४ वर्षीय रामबहादुर मुखिया ढाड दु`ख्ने समस्याले पी*डित थिए । उनलाई धेरै पटक अस्पताल पुग्दा पनि निको भएन ।
झा*रफुक हुने सुनेका २ छोराले रामबहादुरलाई गत २५ पुसमा रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ उदिनढुंगा ल्याए । यस्तै, रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ कि ४० वर्षीया टोपला दमाई पनि शरीर पो*ल्ने र झ*म*झाउने भएपछि झा*रफुक गर्न उदिनढुंगा आइन् ।
मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अर्जेका ३८ वर्षीय रामप्रसाद श्रेष्ठ र ३६ वर्षीया शान्तिला श्रेष्ठ दम्पतीले झा*रफुक गर्थे । रामबहादुर मुखियालाई चार दिनदेखि श्रेष्ठ दम्पतीले घरमै राखे । उपचारमा आएका कसैलाई पनि घरबाहिर निस्कन दिइएन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सुरु-सुरुमा श्रेष्ठ दम्पतीले टाउकोमा जल र जौ, तिल मात्रै छर्किन्थे, सामान्य कु*टपि*ट पनि गर्थे । उपचारमा आएकाले सन्चो हुने ठानेर बिरामीले कु*टपि*टलाई सामान्य ठाने । श्रेष्ठ दम्पतीले बिरामीलाई विस्तारै–विस्तारै अस*ह्य पी*डा दिन थाले ।
टोपला दमाईसँग ११ हजार र रामबहादुर मुखियाका छोरा कृष्णसँग होम गर्ने सामग्रीका लागि भनेर १५ हजार रुपैयाँ मागे । बिरामीका परिवारले पैसा पनि दिए । तर, २८ पुसमा रामबहादुर मुखिया, टोपला दमाई र हुमबहादुर मुखियालाई झा*रफुकको नाममा श्रेष्ठ दम्पतीले म*रणा*सन्य हुने गरी रड, पाइप र झाँझर त*ताएर डा*मे अनि कु*टे ।
कृष्ण कुमाललाई देवता उ*तार्ने भन्दै का*म्न लगाएर कु*टे । झाँ*क्री दम्पतीको कु*टाइले रामबहादुर मुखिया रातभर पी*डाले छट्पटिए । बुधबार उपचार पाएनन्, बरु ज्या*नै गु*माए । घटनामा सं*लग्न मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अर्जे स्थायी घर भई रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ उदिनढुंगा बस्दै आएका श्रेष्ठ दम्पतीलाई प*क्राउ गरिएको
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । ४ दिनदेखि विभिन्न धातु त*ताएर डा*म्दै आएकाले मृ*तकको शरीर सबै ड*ढेर नीलो भएको छ भने घा*इते दुई जनाको पनि शरीरका विभिन्न भागमा ड*ढेका नी*लडा*म रहेको पाण्डेयले बताए ।
घा*इते रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ की टोपला दमाई र मृ*तकका छोरा ३४ वर्षीय छोरा हुमबहादुर मुखियालाई गुल्मी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि पाल्पा रेफर गरिएको गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डा. उत्तम पच्याले जानकारी दिए ।
गाउँदेखि सहरसम्म १० वर्षदेखि झा*रफुक
श्रेष्ठ दम्पतीको झा*रफुक घ*टना पहिलो भने होइन । उनीहरूले गाउँमा पनि १०÷१२ वर्षदेखि झा*रफुक गर्थे । २ वर्षअघि मालिका वडा नम्बर ६ अर्जेकी १ महिला बिरामी भएपछि श्रेष्ठ दम्पतीकहाँ झा*रफुक गर्न पुगिन् । उनीहरूले घरमै ब*न्धक बनाएर पी*डा दिए । उनका श्रीमान् र सासू-ससुरा कसैलाई पनि श्रेष्ठ दम्पतीले घर आउनै दिएनन् ।
अध्याँरो कोठामा बाँटामै दिसापिसाब गराउने र झा*रफुकको नाममा या*तना दिएपछि छिमेकी ढालबहादुर विष्टले घरको ढोका फो*रेर ती महिलाको उ*द्धार गरे । ‘गाउँमा मेरै काकीलाई झन्डै मा*रेनन् । काकालाई समेत ल*ट्ठ बनाए,’ विष्टले भने, ‘ढोका फो*रेर काकीको उद्धार गरेका हाँै ।’ आफुलाई पनि मन्त्र हा*नेर ज्या*न मार्ने ध*म्की आएकाले सबै मिलेर लखेटेका हौँ ।’
यसो भन्छन् घा*इतेहरू
टोपला दमाई :
मैले गत जेठदेखि थाइराइडको औषधी पनि खाइरहेकी छु । शरीर पो*ल्ने र झ*मझाउने भएपछि निकै पी*डा हुन्छ । औषधीले पनि निको भएन । अस्पतालको औषधीले निको नभएपछि खान पनि छाडेँ । त्यसपछि झा*रफु*कतिर लागेँ । गाउँमा पनि कतै-कतै धा*मीलाई देखाएँ । अन्त्यमा अर्जेका १ जनाले तम्घासमा हेरेपछि निको हुन्छ भनेको सुनेपछि आएकी हुँ ।
५ दिनसम्म खान दिएन । ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पैसा दिएँ । पहिले कु*टेनन् । हिजो डाहा लगाउने भनेर कु*टे–पि*टे । आगोले पो*ले, जिउ ज*लेर बस्न खान छैन । ४ जना छोराछोरी छन् ।
हुम बहादुर मुखिया,मृतकका जेठा छोरा :
बुबा पहिलेबाट ढाड, कम्मर दु*ख्ने समस्याले पी*डित थिए । पहिले पनि अर्जेतिर लगेर सन्चो भएको रहेछ । फेरि समस्या बल्झेपछि भाइ कृष्णले तम्घास हेर्छन भनेर ल्याएछ । म २ दिनपछि आएँ । मलाई तँलाई पनि कुल छ, पछि जे पनि हुन सक्छ भनेर बाहिर आउन दिएनन् । २८ पुसमा हो*म गरेर घर कु*हिरीमण्डल बनाए ।
मास, चामल छकर्ने र रड, पाइप, झाँजर, अ*गुल्टो सबैले कु*ट्न थाले । बुबा अ*चेत भएर लडे । अरू ३ जना पनि कु*टाइ खाएर १२ बजेपछि सुत्यौँ । बिहानै ४ बजे उठेर बुबाको टा*उको चार पटक भुइँमा ठो*क्काए । बुबाले ऐ*या पनि भन्न पाएनन् । हामी बोल्ने हिम्मत पनि राखेनौँ । आखिर बुबा म*रे ।
कृष्णबहादुर मुखिया,मृ*तकका कान्छा छोरा :
त्यो घरभित्र पसेपछि प्र*तिकारै गर्न सकिँदैन । ल*ट्ठ परेकाले हामीलाई जे गरे पनि हुन्थ्यो । भित्र एक–एक खुट्टा का*टिएका तरबार छन् । उनीहरू दुवै जना बाहिर गएर रक्सी खाएर आउने र हामीहरूलाई झा*रफु*क भन्दै या*तना दिने गर्थे । मलाई पानी र अबिर खन्याए । ह*तियारले हा*नेनन् र डा*मेनन् । तर, कु*टेकाले शरीर चलाउन नसक्ने भएको छु ।
यसरी खुल्यो घ*टनाको पर्दा
गुल्मी सदरमुकाम तम्घास बजार नजिक श्रेष्ठ दम्पतीको कर्म पहिले कसैलाई पत्तै भएन । उनीहरू तीन वर्षदेखि स्थानीय माधव ज्ञवालीको जग्गा भाडामा लिएर बसेका थिए । त्यहाँ टिनको लामो टहरो छ । सधैँ उनीहरू टहरोमा नबस्ने गरेको छिमेकीहरू बताउँछन् । कहिलेकाहीँ गाउँ र कहिले तराईसम्म झर्ने गरेका थिए ।
पछिल्लो समय दसैँपछि श्रेष्ठ दम्पती तम्घासमै थिए । बुधबार बिहान ह*त्या आ*रोपि*त रामप्रसाद श्रेष्ठ आफ्नो घरमा अ*परिचित व्यक्तिले अ*शान्ति म*च्चाएको भन्दै उजुरी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय आए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दसहितको प्रहरी टोली ट*हरोमा पुग्यो । त्यहाँ मृ*तक र घा*इते व्यक्ति देखेपछि प्रहरी पनि अ*चम्म प¥यो । घा*इतेले सविस्तार कहानी सुनाए । त्यसपछि घ*टनाको र*हस्य उ&द्घटित भयो ।
आखिर घ*टना श्रेष्ठतिरै मोडियो । ‘सामान्य उ*जुरी आएर घरमा पुग्दा ग*म्भीर स्थितिको र*हस्य खुल्यो,’ चन्दले भने, ‘आ*रोपि*त गि*र*फ्तार छन्, थप भइरहेको छ ।’ प्रहरी निरीक्षक चन्दका अनुसार उनीहरू पहिले पनि श्रीमान्-श्रीमतीको झ*गडा गरेर प्रहरीमा आउने गरेका थिए । Palika khabar
काठमाडौँमा ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा बुवाको मृत्यु, छोरी घाइते